EL: ACM VS SHK 6-0….AC Milan oo ku heestey kooxda Shkendija + Sawirro – Gool FM
Raage August 17, 2017
(Milano) 17 Agoosto 2017 – Kooxda AC Milan ayaa si xarrago leh u badisay lugta hore ee kulan laba lugoodle ah oo kala bax ah kaddib markii ay 6-0 ku jiirtay kooxda Shkendija.
Laacibiinta Andre Silva oo xagaagan Milan kula soo biiray lacag dhan 40 milyan oo euro iyo Riccardo Montolivo ayaa min laba ku lahaa goolasha, halka Fabio Borini iyo Luca Antonelli ay lahaayeen labada kale oo ku yimid badhig boqol ah oo ay soo bandhigtay Milan.
Leonardo Bonucci ayaa kulan-bilowgiisii u saftay kooxdiisa Milan oo uu sidoo kale kabtan u noqday, waxaase maqnaa Lucas Biglia iyo Alessio Romagnoli, halka M’Baye Niang, Gustavo Gomez, Davide Calabria, Gabriel Paletta iyo Jose Sosa aan kulankan loogu yeerin kulankan oo ay San Siro ku daawanayeen 40,000 oo qofi.
His first goal at San Siro ⚽️🔥 / Il suo primo gol a San Siro 🏟️#MilanShkendija 1-0 pic.twitter.com/U1VFztglxl
— AC Milan (@acmilan) 17 augusti 2017
Markii ugu dambaysay ee ay Rossoneri hal ciyaar 6 gool Yurub ka dhaliso waxay ahayd Oktoobar 1993-kii oo ay xaaqday FC Copenhagen.
Kooxda Rossoneri oo laba lugood oo kale horay ula soo ciyaartay Craiova oo ay 4-0 ku reebtay isu gayn ahaan ayaa 24-ka bishan lugta 2-aad kusoo ciyaari doonta dalkaasi Macedonia.
GOOGOOSKA: AC Milan vs Shkendija 6-0 (Milan oo dersin dhiibtey)